ဘာသာရေး Archives - Page3of3- Padaethar
ကပ်ဆေးခြင်းဘေးမှ လွတ်ကင်းကြစေရန် “အဋ္ဌာနမေတံ” ဂါထာတော် ရွတ်ပါ . . .
May 13, 2020 by Padaethar
ကပ်ဆေးခြင်းဘေးမှ လွတ်ကင်းကြစေရန် “အဋ္ဌာနမေတံ” ဂါထာတော် ရွတ်ပါ ဤဂါထာတော်သည်ကား…. ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို အရှင်ဒေဝဒတ် ကျောက်မောင်းဆင်၍လုပ်ကြံပြီးကာစ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတော်တို့က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အတွက်စိုးရိမ်ကြသဖြင့် တုတ် တောင်ဝှေး စသည်တို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုအကာအကွယ်ပေးရန်စုဝေးရောက်ရှိလာကြရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်က ကာကွယ်ပေးရန်မလိုကြောင်း ရှင်းလင်းမိန့်ကြားတော်မူရာတွင်တစ်ကြိမ်။ နောက်နေ့မြို့တွင်းသို့ဆွမ်းခံကြွမည့်အချိန် နာဠာဂီရိ ဆင်ဆိုးကြီးကို အရက်တိုက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို လုပ်ကြံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိတော်မူသဖြင့် ညီတော်အရှင်အာနန္ဒာက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ရှေ့မှ ကြွသွားပြီး ဘုရားရှင်ကိုအကာအကွယ်ပြုမည်ကို မလိုအပ်ကြောင်း အရှင်အာနန္ဒာအား မိန့်ကြားတော်မူရာတွင် တစ်ကြိမ်။ နှစ်ကြိမ်တိုင် “ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏ သဘာဝ မည်သူကမျှ မည်သို့မျှ ဘုရားရှင်တို့၏ အသက်ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်၍ မရကြောင်း ဘုရားရှင်တို့သည် အချိန်တန်မှသာ မိမိတို့အလိုလိုသာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြရမြဲဖြစ်ကြောင်း” မိန့်ကြားတော်မူသော ဂါထာတော်ဖြစ်၏။ “အဋ္ဌာန မေတံ ဘိက္ခဝေ အနဝကာသော၊ ယံ ပရူပက္ကမေန တထာဂတံ ဇီဝိတာ … Read more
COVID- 19 နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမ တွေကို သတိရကြဖို့ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် တိုက်တွန်း . . .
May 10, 2020 by Padaethar
COVID- 19 နဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမ တွေကို သတိရကြဖို့ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် တိုက်တွန်း ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ အခုလို COVID- 19 ကပ်ရောဂါ ဆိုးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတွေက ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် နရင်ဒရာမိုဒီက ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ “ ကမ္ဘာတဝှမ်း အခြေအနေတွေ မတည်မငြိမ် နဲ့ ၀ရုန်းသုန်းကားဖြစ်နေချိန်မှာ ၊ အချိန်အတော်များများ ဝမ်းနည်းပူဆွေးတာတွေ၊ စိတ်ပျက် အားလျော့တာတွေ ၊ မျှော်လင့်ချက် မဲ့တာတွေကို အလွန်ခံ စားကြရပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမ တွေက အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။” ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားကို ဖွားမြင်တော်မူတဲ့ နေ့ဖြစ်သလို၊ ဘုရားအဖြစ်ကို … Read more
“ကဆုန်လပြည့်နေ့ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ…” ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အကြောင်းကို သိစေရန်အတွက် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးပြီး ဘုရားရှင်ကို ပူဇော်သက္ကာရ ပြုလိုက်ရပါတယ်။ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးတစ်နေ့ဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့— (၁) ဘုရားအလောင်းတော် ရသေ့ သုမေဓာဟာ ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာမှ လေးဆူမြောက် ဂေါတမဘုရားစင်စစ် ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားထံ နိယတဗျာဒိတ် ခံယူတဲ့နေ့ဟာ ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဖြစ်တယ်။ (၂) ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားလေး မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့နေ့လဲ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ ခု၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။ (၃) ဂေါတမဘုရားအလောင်း ဗောဓိပင်အောက်မှာ ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့လဲ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃) ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။ (၄) ဂေါတမဘုရား ပရိနှိဗ္ဗာန်စံတဲ့ နေ့ဟာလဲ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်ပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် … Read more
နှငျးဆီပနျး(၅)ပှငျ့ သပွပေနျး(၅)ခကျ လမုနျ့(၅)ခုတို့အား လငျဗနျးတဈခပျြထဲတှငျလှပအောငျပွငျဆငျ၍ထညျ့ပွီး ဖယောငျးတိုငျ(၅)တိုငျ |အမှေးတိုငျ(၅)တိုငျ|သောကျတျောရေ(၅)ခှကျစီကိုလညျး ဘုရားရှငျအားဆကျကပျလှူဒါနျးပါ အနန်တော အနန်တ ငါးပါးအား ရညျစူးကပျလှူပူဇျောရငျး အောကျပါအတိုငျး လေးလေးနကျနကျ ဆုတောငျးပေးပါ `ဘုရားရှငျအမှူးရှိသော အနန်တငါးပါးအားရညျမှနျး၍ ရညျစူး၍ နှငျးဆီပနျး (၅)ပှငျ့တိုဖွငျ့လညျးကောငျး| သပွပေနျး(၅)ခကျတို့ဖွငျ့လညျးကောငျး| လမုနျ့(၅)ခုတို့ဖွငျ့လညျးကောငျး| ဖယောငျးတိုငျ(၅)တိုငျတို့ဖွငျ့လညျးကောငျး| အမှေးတိုငျ(၅)တိုငျတို့ဖွငျ့လညျးကောငျး| ရတေျော(၅)ခှကျတို့ဖွငျ့လညျးကောငျး ကပျလှူပူဇျောကနျတော့ပါ၏ ဤသစ်စာမှနျကနျပါက| ဤမှနျသောသစ်စာစကားကွောငျ့လညျးကောငျး| ဤမှနျသောသစ်စာတနျခိုးကွောငျ့သျောလညျးကောငျး| အရပျလေးမကျြနှာ| အရပျရှဈမကျြနှာ| အရပျဆယျမကျြနှာတို့မှ ငှကွေေး|စညျးစိမျဥစ်စာ| ရတနာမြားစှာတို့သညျလညျးကောငျး| စိနျရှရေတနာ| ကြောကျမကျြရတနာမြားစှာတို့သညျလညျးကောငျး |အလုပျအကိုငျ| အကွံအစညျကိစ်စမြားစှာတို့သညျလညျးကောငျး လငျြမွနျစှာတိုးတကျဝငျရောကျ လာကွပါစသေတညျး လငျြမွနျစှာ ဝငျလာမစဲ |တသဲသဲ စညျကားလာကွပါစေ| ရောကျရှိလာကွပါစကေုနျသတညျး ‘ဟူ၍ (၅)ကွိမျ |(၅)ခါတိတိ ရှတျဆိုဆုတောငျးပေးရပါမညျ ကဆုနျလပွညျ့နမှေ့စ၍ ကံပှငျ့ကံမွငျ့ အကွံအစညျ အလုပျအကိုငျမြားအောငျမွငျကွပါစေ ဆရာကြျောဇောဟိနျး ဟောခနျး-34လမျး-73လမျးနှငျ့74လမျးကွား|မောရဂီဝါရပျကှကျ မန်တလေးမွို့ … Read more